၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXXV | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXXV
၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXXV
၊ကြိုက်လက် မ ။ထောင်ပေးဦးရေ(၅၈၅၂၆၀)(၊ထောင်ပေါင်း၊၅၈၅.၂)ထိတက်လာ၊
Apr 22, 2019 Likes 587,108.၊လက်မ ၊ထောင်၅၈၇,၁၀၈.
ကွင် တေ ဝု ခမ်း Good
ြ မစ်ဆုံ မြစ်​ဆုံကိုမြန်​မြန်​လုပ်​ကြပါဗျို
Shar Reh ဒီလိုအလုပ်​အရမ်း
Czar Kho ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​
မြစ်ဆုံလုပ်သင့်တယ်ဆ်ုရင် အရင် အစိုးရ ကို အရင်တောင်းပန်ကြပါ။ ကန့်ကွက်တာ မှားမိပါတယ်လို့။
အီရန်မှာ karunမြစ်ကိုပိတ် ဆည်တွေ ရေကာတာတွေ
၂၊အီရန်စစ်တပ်(Revolutionary Guard ၊တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်)၊တွေကမိမိတို့ကြီးစိုးရာ
ကာလတွေတုံးကလည်းတစ်ကောင်မှမပါခဲ့ဘူး မြေကိုယူမည် ငွေကိူယူ…See More
မြစ်ကိုပိတ်က ဒို့ဗမာတွေသေနိုင်တာကြောင့် အားလုံးတားကြပါဒိုမြန်မာများ
ငါတို့ဒုက္ခ​ရောက်​တာ​တော်​​သေးတယ်​ ငါတို့ရဲ့အနာဂတ်​က​လေး​တွေ​တော့ဒုက္ခအ​ရောက်​မခံနိုင်​ပါ ကာကွယ်​​ပေးကြပါ ​
ဆရာတော် ဟောပါတယ် ဧရာဝတီပျောက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံပျောက်ပြီတဲ
နွားလို​ကောင်​​တွေ တစ်​ဘို့ပဲကြည့်​ကြတာ နိုင်​ငံ​ကောင်းကျိုးဘာတစ်​ခုမှမပါဘူး
မြစ်ဆုံကို ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မတွေးဝံ့စရာပဲ…See More
​သြော်​ အရိုးကိုက်​တာကို​ကျေနပ်​​နေသူ​တွေလဲရှိ​နေပါ့လား သနားစရာ ​ကောင်းလိုက်​တာ
အဲဒီထဲကမြန်မာအနေနဲ့ ရရှိမဲ့ ခံစားခွင့်က ၁၀%ပဲရှိပါတယ် လိုအပ်လို့ ဝယ်မယ်ဆိုရင်20% နှုန်းပဲရနိုင်ပါမယ်
၊ဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာတယုတ်ဆိုတာတခုတည်းနဲ့တင်ကန့်ကွတ်တယ် ထပ်ပြောလိုက်မယ် တရုပ်မို့လို့ကန့်ကွတ်တယ်ရှင်းတယ်နော်
မြစ်ကြီးပိတ်လိုက်ရင် အပူပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် အပူပိုလာမယ်…See More
Cardinal Bo ၊ကာဒင်နာဗိုယ်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှု
၊ဆောင်းပါး #၂၅ မှ #၆၇
၊ဆောင်းပါး #၂ မှ #၇
အထက်ပါအီရန်နိုင်ငံက Karun ၊။အာရွန်မြစ်ခမ်းချောက်တဲ့ကိစ္စဟာရေအားမှလျှပ်စစ်ထုတ်ရေကာတာတွေ
၊၊မြောင်လူမျိုးစုမှအဆိုကျော်. ၊ဆုန့်ဇူရင်းက. ၊စီလင်းဒီရုန်း၂ပါးတွဲဆို၊
အခမ်းအနားတွင် ပို့ ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးသန့် စင်မောင်က ယခု တည်ဆောက် ပြီးစီးသည့် ရေကြောင်းပြ အဆောက်အအုံသည် နိုင်ငံတော် အဆင့် အမာထည် အခြေခံ အဆောက်အအုံများတွင် ပါဝင်ပြီး နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ပြုစေနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ ယခုကဲ့သို့ ပင်လယ်ပြင် အခြေစိုက် ရေကြောင်းပြ အဆောက်အအုံအား နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ စံချိန်စံညွှန်း အရည်အသွေး ပြည့်ပြည့်ဝဝဖြင့် ပြီးမြောက် အောင်မြင်အောင် တည်ဆောက် နိုင်ခဲ့သည့် အတွက် နိုင်ငံတော် အနေဖြင့် ဂုဏ်ယူကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
လန်ချန်း-မဲခေါင် နိုင်ငံတကာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အင်စတီကျု(မြန်မာ ၀မ်ပေါင် ကျောင်းခွဲ) ဖွင့်လှစ်ရေး သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး
တရုတ် နိုင်ငံ က မြန်မာ နိုင်ငံ ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန သို့ သွား နှင့် ခံတွင်း ဆိုင်ရာ ပစ္စည်း ကိရိယာ လှူဒါန်း
မြန်မာ နိုင်ငံ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အတွက် တရုတ် နိုင်ငံ က လန်ချန်း-မဲခေါင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အနေဖြင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇.၃၇ သန်း လွှဲပြောင်းပေးအပ်